လ၏ Dawn င်များ – Dawn ဆေးခန်း
ဇန်နဝါရီလ 2020 – Meredith Ware
Meredith သည် Care Coordinator ၏ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပြီးဆေးခန်းမန်နေဂျာလည်းဖြစ်သည်. သူမသည်သူမ၏မာစတာရဲ့ပြီးသွားနေစဉ်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုပြုတော်မူပြီ, ဆေးဝါးလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း!
မေလ 2019 - Fred Gonzalez
ဖရက်သည်ဖွင့်ကတည်းက DAWN နှင့်အတူရှိခဲ့သည်. သူသည်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့်စတင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အထိတက်ခဲ့သည်. Fred သည်ဖြုတ်ချခံထားရသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်နေထိုင်ခွင့်သို့သွားစဉ်တွင်ဆရာ ၀ န်ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်! သူ့ကိုမကြာခင်ဆေးခန်းမှာဆရာတစ် ဦး အဖြစ်တွေ့မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
ပြီလ 2019 - Dane Olsen
အောက်တိုဘာ 2017 - ဂျူလီယာမာစတာ
Jules DAWN ၏ ၀ ိညာဉ်ကိုဖော်ပြသည်. သူမမှာကြီးမားတဲ့စိတ်နှလုံးရှိပြီးကျန်းမာရေး ၀ န်ထမ်းတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့တကယ်ဂရုစိုက်ပါတယ်! သူမသည်သူနာပြုအတန်းသစ်အတွက်ထူးချွန်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး DAWN ကိုပြိုင်ဘက်ကင်းသောမောင်းနှင်အားနှင့်သရုပ်ပြမှုကိုပြသခဲ့သည်. သူတို့တိုတို ၀ န်ထမ်းတွေနေတဲ့နွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုတောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်!”
စက်တင်ဘာ 2017 - Beatrice Guillermo
Beatrice သည် Care Coordination workgroup တွင်အသင်းဝင်တစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်. သူမ၏လူနာများမှသူမ၏အပျနှံ, စောင့်ရှောက်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး၏မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ကျော်လွန်၍ သွားနိုင်သည်, သူမအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့် DAWN တိုးတက်စေရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်.
သြဂုတ်လ 2017 - Kelsey Moore
အားလုံးမကြာခဏ, DAWN ဆေးခန်းအောင်မြင်ကြောင်းသေချာစေရန်နောက်ကွယ်မှအလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့ ၀ င်များကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့သည်. Kelsey သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်နှင့်အမှာစာများကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်. သူမသည်သူမယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြောင်းမရှိဖြစ်ဒီအနေအထားအတွက်ထူးချွန်, တက်ကြွ, နှင့်အသေးစိတ်သာလွန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှိခဲ့ပါတယ်. ဒါအတွက်, Kelsey ကိုကျွန်ုပ်တို့၏သြဂုတ်လအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်.
ဇူလိုင်လ 2017 - က Nicholas Arlas
DAWN သို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆေးပညာကျောင်းသားအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်, နစ်ခ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့်အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်ထောက်ခံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်. သူ, Josten နှင့်အတူ, အထူးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုတ်အထူးဆေးခန်းကိုစတင်ရန်တွန်းအားများဖြစ်သည်.
ဇွန် 2017 - Josten ယေဘုယျအား
Josten သည်သူမ၏ပဏာမလုပ်ဆောင်မှုနှင့် DAWN အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်လ၏အသင်းဝင်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်. နစ်ခ်နှင့်အတူ, သူတို့ကအဆုတ်အထူးဆေးခန်းကိုဖန်တီးရန်အစပြု ဦး ဆောင်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, Josten သည်အခြားအခန်းကဏ္ on များတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဆေးခန်းတွင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်. သူမသည်အမြဲပျော်ရွှင်ပြီးချဉ်းကပ်ရလွယ်သူဖြစ်ပြီးလူနာများမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်.
မေလ 2017 - ဂျိုး Oropeza
ပြီလ 2017 - Amy Bickel
မတ်လ 2017 - အဲလက်စ်ငုယင်
ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 - Chelsie Yoshioka
ဇန်နဝါရီလ 2017 - Brittany Sterling
ဒီဇင်ဘာ 2016 - Rima Baliga
နိုဝင်ဘာ 2016 - Joaquín Quintana
အောက်တိုဘာ 2016 - Fred Gonzales
စက်တင်ဘာ 2016 - Brett Friedman
ဇူလိုင်လ 2016 - Tuong Phan
ဇွန် 2016 - Andrea Mariani
မေလ 2016 – Amanda VanMatre
အစကတည်းက, မည်သူမျှမတွေ့ရသောမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်းအမန်ဒါကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်. ပထမနှစ်ဆေးဆိုင်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်ဆေးကုသမှုခံယူရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်စုဆောင်းရေးကိစ္စကိုမကြောက်မရွံ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။. သူမအောင်မြင်ခဲ့ရုံသာမကသူမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကအတားအဆီးအချို့ကိုကျော်လွှားရင်းဆက်လက်တည်မြဲခဲ့သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, မန်ဒါသည်စစ်မှန်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏အမှတ်အသားကိုပြသခဲ့သည်။ သူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်သူ၏လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၀ င်တိုင်းတွင်ပြသခဲ့သည်. သူမသည် DAWN တွင်လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးတိုးတက်ရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ်သူမ၏အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်.
ပြီလ 2016 – Kumar Patel
Hardik Patel က, သို့မဟုတ် Kumar ကအများစုသူ့ကိုသိသည်အတိုင်း, Care Coordination team အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. သူကငါတို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကြိုးပမ်း - ငါတို့မောင်းနှင်နေသည်မျှော်လင့်ပါတယ်အဘယ်အရာကိုဖော်ပြသည်, ကြင်နာ, အလုပ်ကြိုးစားသော, နှင့်အခြားအရာအားလုံးအထက်, ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်. အမှုအရာအမှုကိုပြုရရန်လိုအပ်သည့်အခါ, သူဘယ်တော့မှ ၀ င်ရန်တွန့်ဆုတ်နေပြီးအသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးကူညီနိုင်ကြောင်းသင်ပေးသည်. သူဟာအသင်းကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ. Kumar သည်လူနာနှင့်ဆက်သွယ်သူကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းဖြင့်သူသည်လူနာအားသက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီးပံ့ပိုးသူအားသူတို့၏လူနာကိုဂရုစိုက်နိုင်စွမ်းအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိစေရန်ကူညီသည်။. ယခုလတစ်လတည်းတွင်သူ၏ပြည့်စုံသောစာရွက်စာတမ်းများကြောင့်သူအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်, ဆက်လက်ပါဝင်မှု, နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်. ထို့ကြောင့် Kumar သည် Care Coordination Workgroup ခေါင်းဆောင်သစ်နှင့်ဤလ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်.
မတ်လ 2016 – Matthew Applegate
ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 – Deanne Bihler
Deanne Bihler သည်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်မှု၏စံပြအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်. ကျောင်းသားအများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကျောင်းအဖွဲ့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည်အထိစောင့်ဆိုင်းသည်. Deanne ကြောင်းသူမ၏နောက်ကျောကိုင်ကြကုန်အံ့. သူမသည်စမ်းသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသူမ၏ phlebotomy ကျွမ်းကျင်မှုကိုစတင်ဝေမျှခဲ့သည် (နှင့်သူမ၏သွေးပြန်ကြော) အခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူ. လအနည်းငယ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့် Deanne စမ်းသပ်အုပ်စုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးအုပ်စုတွင် Co- ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ on မှပါဝင်ခဲ့သည်. သူမကသူနာပြုကျောင်းသားအခန်းကဏ္ volunte တွင်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ သူနာပြုကျောင်းသားသစ်များကိုကူညီရန်အပိုမိုင်ကိုသွားသည်. Anschutz မှာလေ့လာတဲ့ PCP စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မတူတာက, Deanne က Parker ရှိသူနာပြုကျောင်း၏တောင်ဘက်ကျောင်းဝင်းမှဆေးခန်းသို့ပို့ဆောင်သည်. လူတိုင်းကဒီအများကြီးစွမ်းအင်ကိုဆေးခန်းသို့ယူဆောင်လာလျှင်, ကျနော်တို့ကအခြားညဥ့်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ချင်ပါတယ်.
© 2021 Dawn ဆေးခန်း | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး